Lọ ọrụ na-emepụta ihe owuwu ụlọ - China Architecture Fence Manufacturers, Suppliers
Cokwanyere ntekwasa Weld waya ntupu na-apụta maka ulo oru na ugbo ngwa
Cokwanyere ntekwasa weld waya waya ntupu bụkwa ụdị nke ịgbanye waya ntupu ngere ma juru n'ọnụ na mpịakọta n'ihi obere pere mpe nke waya. Ọ na-akpọ dị ka Holland waya ntupu ngere, Euro nsu netting, Green PVC ntekwasa ókè fencing ntupu na mpaghara ụfọdụ.
Ugboro abụọ gburugburu Powder ntekwasa Waya ntupu ngere maka Municipal engineering
Ugboro abụọ gburugburu weld waya ntupu ngere na-akpọkwa abụọ loop waya ntupu ngere, ogige nsu, ji achọ ngere. Ọ bụ ezigbo nsu iji chebe ihe onwunwe ma mara mma nke ọma. Yabụ iji ya arụ ọrụ na injinịa nke ọchịchị obodo, injinịa ụlọ.
BRC welded waya ntupu ngere bụ ogige pụrụ iche nwere enyi na gburugburu ka akpọkwara mpịakọta elu ngere na mpaghara ụfọdụ. Ọ bụ ogige weld mesh na-ewu ewu na Malaysia, Singapore, South Korea maka ngwa obibi na nke azụmahịa.
L-welded welded waya ntupu ngere maka ụkpụrụ ụlọ ụlọ
A na-ejikarị eriri waya welded a na-ejikarị eme ihe dịka nsu nsu, ị nwere ike ịchọta ya gburugburu ebe obibi, ụlọ ahịa, ebe a na-adọba ụgbọala. Ọ dịkwa ọkụ na-ere nchekwa nchekwa na ahịa APCA.
Perforated metal nsu panel maka ụkpụrụ ụlọ ngwa
Ọ bụrụ na ịchọghị igosipụta ihu adịghị mma ma chọọ maka nke ọma, ngere mara mma na-agbakwunye uru gị, ọ ga-abụ ezigbo ogige. Ọ na-kpọkọtara nke perforated mpempe akwụkwọ na metal square posts ga-adị mfe, mfe ma doo anya na iji wụnye.
Chain Link ngere N'ihi azụmahịa na obibi ngwa
A na-akpọkwa eriri njikọ eriri dị ka ntaneti waya, ntan-waya ntan, eriri waya, eriri ngere, ikuku hurricane, ma ọ bụ ngere diamond. Ọ bụ ụdị nke ogige a kpara akpa nke a na-ejikarị waya waya galvanized na ogige ịgba gburugburu na-ewu ewu na Canada na USA.